Home » Aha! Jokes, Satire » ခြစ်ခြင်းတယားနဲ့ ပီဒေါင်ဇု
Posted by CharTooLan on Dec 23, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Music | 25 comments
အခိုင်မာဆုံးသော ပြည်ထောင်စုတွေ၊ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ပြိုကွဲလျှက်ရှိကြပေ
အယူအဆအမျိုးမျိုး လိုရာဆွဲကာ၊ စစ်ခင်းလျှက်ရှိကြပေ
လူမမယ်ခလေးများ၊ အဘိုးဘွားနဲ့ သားသည်မိခင် ရတက်မအေးရပေ…။
ဒီအဖြစ်မျိုးတော့ မကြုံချင်ဘူးလေ၊ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို အစဉ်သုံးသပ်ကြလေ
အနာဂါတ်အကျိုးအတွက် မျှော်ရည်မှန်းကာ ချစ်ခြင်းတရားနဲ့လေ
ပြည်ထောင်စုသားတွေ မကွဲမပြားပဲ နှလုံးသားနဲ့ သတိမူကြရင် ရတက်အေးရလိမ့်မည်
ဒို့အသက်နဲ့ ဒို့ခန္ဒာတွေ အမြဲရှိသရွေ့ရင်ထဲမှာ
ဒို့အသက်နဲ့ ဒို့ခန္ဓာတွေ အမြဲရှိသရွေ့ရင်ထဲမှာ
~~~~ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချင်~~~~
အခုပွဲလေးဖစ်မျောက်အောင် ကူညီပေးကြဒဲ့ သငယ်ဂျင်း အပေါင်းအသင်း ရောင်းယင်းများ အားလုံးဂို အထူးဘဲ
ကျေးဇူးတင်ဘာာားးးးးးဒယ်~~ သချင်းတိုက်ကူပေးတဲ့ ချစ်တနယ်ဂျင်း တုံချိန် နဲ့ သချင်းဆိုဖို့ အကြိန်ကြိန်အားပေးဂဲ့ဒဲ့
အာကိုယီး ကဖက်ကက်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ဘာာားးးးးးဒယ်~~ hehee
ဘယ်ညာဆွဲပီး ဆိုယေ ချာချာရဲ့ …
ဇာတိတွေး ဇာတိမာန်ယေးလည်း ပါတွားအောင် ….. ။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတော့ဖြင့် ၀ါဒဖြန့်သီချင်းတွေ… ပေါ်လစီသီချင်းတွေ
သူကြီးရဲ့ ဂဇက်မြို့တော်ကြီးမှာဖြင့် အလန်းဇယား… အကြမ်းစားတွေနဲ့ မဲဆွယ်နေကြတယ်လို့ထင်ပါ့….
ကျုပ်နာမည်များခေါ်ပြီး “တ” လိုက်တော့ဖြင့်… ကျုပ်မှာ ပရောဂမှန်လို့ တုန်ဆင်းလာခဲ့ရတာပါ…
တရုတ်ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီနဲ့အစိုးရစစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတို့ ကြေးနီထုတ်လုပ်နေတဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသမှာ ကုမ္ပဏီတွေ ခြံစည်း ရိုးခတ်နေတာကို တားမြစ်ခဲ့ကြတဲ့ မြေသိမ်းခံတောင် သူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး အနည်းဆုံး ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အသိမ်းခံထားရတဲ့မြေတွေကို ကုမ္ပဏီက ခြံစည်းရိုး ခတ်နေတဲ့အတွက် မြေယာလျော်ကြေး မယူခဲ့ကြတဲ့ ရွာ ၃ ရွာက တောင်သူတွေက တားမြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မိုးကြိုးပြင်အလယ်ရွာ တောင်သူတွေက လိပ်ခွံတောင် အနီးမှာ တားဆီးခဲ့ကြရာမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဒေါ်ခင်ဝင်း အမည်ရှိ တောင်သူအမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦး ဦးခေါင်းကိုထိမှန်ပြီး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားတယ် လို့မိုးကြိုးပြင်အလယ်ရွာက လယ်သမား ဦးဇော်မြင့်သန်းက ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူ ဒေါ်ခင်ဝင်းဟာ အသက် ၅၆ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီး၊ သမီးနှစ်ယောက်က ကျန်ရစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေထဲမှာ အခုဖြစ်ရပ်ဟာ ပထမဆုံး လူသေဆုံးရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ ဆည်တဲရွာဘက်မှာလည်း သိမ်းယူထားတဲ့မြေတွေကို ခြံစည်းရိုးခတ်နေလို့ တောင်သူတွေ သွားရောက်တားမြစ်ရာမှာ တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေက ရိုက်နှက်တဲ့အတွက် ဒဏ်ရာရသူတချို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံ မသွဲ့သွဲ့ ဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။
“ကျမတို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ရဲမင်းကြီးကိုလည်း ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်၊ ကျမတို့ ဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ခဲတွေနဲ့ထုတယ်၊ လေးခွနဲ့ပစ်တယ်၊ ကျမကိုရှေ့တိုးလာရင် တပ်ရင်း ၁၆ က တပ်ရင်းမှူးက ကျမကိုအမိန့်ပေးတာ ဒီကောင်မကိုပစ်တဲ့၊ ပိုပြီးတော့ဆိုးတာက တရုတ်တွေက အကုန်လုံးကိုတူတွေနဲ့ လိုက်ထုတာ အခုခါးတွေရော၊ အကုန်မှန်တဲ့သူကမှန်လို့ မထနိုင်ကြဘူး၊ သူတို့သံဆူးကြိုးခတ်ဖို့ရာ သံလုံးတွေကိုရိုက်ဖို့ တူတွေပါလာတာ၊ အဲ့ဒါတွေနဲ့ ဒေသခံလူထုတွေကိုရိုက်တာ၊ သူတို့ကစရိုက်တာ”
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဒေသခံလယ်သမားတွေကို ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း က ဒေသခံတွေကို ဆေးအဖွဲ့စေလွှတ်ပြီး သွားရောက်ကူညီမယ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောပါတယ်။
၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ကိုမင်းကိုနိုင်က လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသဖက်ကို ဒီညသွားရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
“ဆေးအဖွဲ့ပေါ့ဗျာ၊ အဲ့ဒါကိုဖွဲ့ပြီးတော့ အဲဒီ့မှာနီးစပ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ဆေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အတူတွဲပြီးတော့ ကျနော်တို့ဆီကနေ အင်အားတစ်ဖွဲ့ကိုသွားမှာပါ၊ အဲ့မှာလောလောဆယ် ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကို ကုသပေးဖို့ရယ်၊ နောက်တစ်ချက်က ဖြစ်စဉ်ရဲ့ အသေးစိတ်အဓိပ္ပာယ်တွေကို အမှန်အတိုင်းသိရဖို့ပေါ့၊ အဲ့နှစ်ချက်ကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်တို့လွှတ်မှာပါ”
အစိုးရရဲ့ သဘောတူခွင့်ပြုချက်နဲ့ ကြေးနီတူးဖော်ရေး စီမံကိန်းဧရိယာကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ကြောင်း ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ဒီနေ့မှာပဲ ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလ ၁၃ရက်နေ့ကလည်း ကုမ္ပဏီနဲ့ ဒေသခံတွေကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လယ်သမား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်း ဖတ်နေရတာ.. သီချင်းလည်း..လိုက်မဆိုနိုင်တော့ဘူးဟာ…
ပန်းကုံးတွေ ပန်းဂွေတွေ…ဘာတွေ… အနီးကပ် စွပ်လို့ရတယ်နော် အူးမျိုး
အဝေးကလဲလှမ်းပစ်စွပ်လို့ရဒယ် kwi kwi
ငြိမ်းချမ်းရေးဂို လိုလားလို့ နှစ်ခေါက်ပျံလာဖတ်တာ…. ။ ခွိ
ခြစ်ခြင်းတရာ တော့ စိတ်ဝင်ဇားသားး
မြန်မာပြည်ကတော့.. လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကို.. လှည့်တောင်မကြည့်.. အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာလုပ်နေပုံနဲ့တော့.. ကွဲမှာသေချာ..။
ဘယ်အမျိုးလည်း..။ ဘယ်ဘာသာလည်း..။ ဘာသာသနာလည်း.. ဗမာတွေပြန်မေးကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်..။
ဟိုကလေးမက.. သီချင်းဆိုတာလား.. ခုနှလွှာချွတ်ကဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာလား.. လို့..။
” လှသား.. ”
လှတဲ့ သမီးလေး ဆိုတော့လည်း ပြချင်ရှာသပေါ့ကွယ် ။
..ကျော်လေ..သူ့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖူးသဗျ..လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်တုန်းက…အဟိဟိ ..ကချင်ဘုရားကျောင်းမှာ သူက သီချင်းဆိုတာဗျ…အဟိဟိ ..မပြောရဲခဲ့တာ..ခုများတော့..အတဲလေးရယ်…ကယ်ပဲ
ထိုထိုပုံစံနဲ့ မဲရရှိရေး စည်းရုံးရေးဆင်း လိုက်ကာဖျော်ဖြေရင် ၀က်ဝက်ကွဲဘဲဗျို့။ အားပေးလိုက်ကြမှာအမှန်ပင်။
မိုင်​လီဆိုင်းရပ်​စ့်​ ကျအငမ်းမရ အား​ပေးဂျဒယ်​
ငဒို့ ညီမ​လေးကျ ၀ိုင်းဆဲဂျဒယ်​
ညီမ​ငေး ကိုယီးရှီ လာ
အဲဒီ သီချင်း ကို အဲဒီ မိန်းကလေးက ဆိုတာလား။
အပေါ်က ပုံ ထက် အောက်က ပုံလေးက ပိုပြီး လှတာပါကွယ်။
အပေါ်က ဘဲသားရည် ဘဲ ရမယ်။
ကြက်သရေ တော့ မရဘူး။
အဲဒီ သီချင်းက ရုရှားပြည်ထောင်စု ကွဲတာကို ဆိုထားတာ ထင်ရဲ့။
အခုတော့ အဲဒီနိုင်ငံ ကို ဆရာကြီးတင်နေတော့တာ။
လောလောဆယ်တော့ အဲဒီဆရာကြီး လဲ မရှုမလှဘဲ။
ဆိုနီ ကို ဟက် တာလဲ သူတို့ လို့ ထင်မိနေတာ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုတော့ မကွဲစေချင်ပါ။
အဲ့သီချင်းက မ​ဟေမာ စဆိုခဲ့တာမှတ်​တယ်​
.ဘယ်လိုစုထားတာလဲ ဆိုတာကလဲ အရေးပါ ပါတယ်။
.စိတ်တူ ကိုယ်တူ တန်းတူ ရည်တူ စုထားမှ
.ခိုင်မာတဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်မှာ….။
.ဆေးဖိုး စာအုပ်ဖိုးတွေ နဲ့ရင်းပြီး
.စစ်တိုက်လို့မဆုံးတဲ့ ပြည်ထောင်စုပဲ ဖြစ်မှာ..။
အမွန်းလေး မိုက်ပါဒယ် အူးလေးရဲ့…..
ပြီထောင်စုအောင်မယ်မင်း ပြည်ထောင်မှာပဲစုဒေါ့မာလား တရုတ်ပြီသူ့ သန်းမဒညန်မာနိုင်ဂံဒေါမှာ ဘိုနေရမာဒုန်း :byee:
မလုံတဲ့တျောက်က အဲ့သီချင်းမဆိုပါဘူးခည နာမည်ကတော့ အမွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။
အဲ့တျောက်ကဘူးမှဂုမစိုက်ဘူးဒဲ့ခည သူမမှားဝူးဒဲ့ သူ့ကိုဝေဖံလေကံရင်လဲ သူကလုံးဝလက်မခံပါဝူးဒဲ့
အခုထိတော့ ဟေမာနေဝင်းပဲ အဲ့ဒီသချင်းကိုဆိုတာတွေ့ပါဒယ်……..
ကျနော်က ပီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်း ရွာထဲနဲ့ ဖွဘုတ်မှာ ပွဲအစူဇုံးကေ့စ်နှစ်ခု ကိုတွဲထားတာဘာ
ပြည်မြို့က ထောင်ထဲမှာ စုထားတာလို့ အူးဇာဂနာပြောတာကြားဖူးတာဘဲ
ဒါနဲ့ခဏခဏမန့်သူယီးက ပြည်ထောင်စုထက် အမွန်းကိုပိုဓါတ်ကျတယ်ထင့်
ဒီသီချင်းကို ပထဦးဆုံးဆိုတာ ဟာဂျီဦးခင်မောင်ထူး ပါကွီ…
နောက်တာမဟုတ်… တကယ်ပြောတာ …
-လာမဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမာ အိုက်သီချင်းကို ကာလာအိုကေ ဆိုကြမလား ???
(ရွာသူားများ စည်းလုံးညီညွတ်ပီး ရွာချစ်စိတ်တွေ တိုးလာအောင်လေ)
ဆိုနေရင်း ကီးတွေ မကိုက်လို့ …
အဲ့ သခြင်း ကျားယင်​ မဆာလာနံ့ ပါ နံ လာသလိုလိုဘဲ ​အောက်​ခံ ​ဂျေး ​ပြောင်​​အောင်​ မချွတ်​ပဲ ​ပေါလစ်​ဆီ ​တွေ တင်​ဂျမ်းတိုက်​ထားတဲ့ ဆက်​တီခုံ ကို ပဲ မျင်​​ရောင်​​နေမိဒယ်​ ဂယ်​​ပျော ဒါ